Imbali kunye neNkcubeko Amazantsi Emelika
Imyuziyam kaZwelonke yaseColombia:
Imyuziyam kaZwelonke yaseMolombia ( Museo Nacional ) isentliziyweni yaseBotota. Ingqungquthela, isakhiwo esinezitezi ezintathu esinikezelwe ubugcisa be-Columbia kunye nembali. Nangona kukho imiboniso enomdla kakhulu, yonke into iyomile.
Ukutyelela iMyuziyam kaZwelonke:
Imyuziyam kaZwelonke yaseColombia igxininise kwi-10 ye-Plaza Bolivar (intliziyo yeBotota yakudala) kwiCarrera 7 phakathi kwe-calle 28 ne-29 calle.
Kunokwenzeka ukuhamba ukusuka kwelinye ukuya kwelinye, okanye kukho iibhasi rhoqo. Isakhiwo samatyuyamu sisakhiwo esikhulu sotena esasibhakabhaka esasisentolongweni: abagadi bebusuku bafungela. Ivulekile imihla ngemihla ngaphandle kweMvulo. Iiyure zi-10-6, 10-5 ngeCawa. Ukwamkelwa kwabadala kungaphantsi kwama-$ 2 US kwaye kukhululekile ngeCawa.
Yintoni kwiMyuziyam ?:
Imyuziyam kazwelonke yaseColombia igqithiselwe kwimbali kunye nobugcisa kwaye ihlanganisa yonke into ukusuka kubemi bokuqala baseColombia kuze kube ngoku. Kwinqanaba elisezantsi kunazo zonke amagumbi agcwele iimbumba zamandulo kunye nemigcobo yegolide kunye neemifanekiso ezivela kwiinkcubeko ezide. Iimyuziyamu inamacandelo ekunqobeni, ngexesha lekoloniyali, ukuzimela kunye nexesha lamaRiphabliki. Umgangatho ophezulu uzinikezelwe kwimihla yamanje, kodwa ngokuyininzi ubugcisa kunye nembali encinane kakhulu. Kukho isitolo esincinane sesipho kunye nevenkile yekhofi kumgangatho wokuqala.
Amaphupha ephambili eMyuziyam kaZwelonke:
Imyuziyam ihlukaniswe ngamacandelo ahlukeneyo, amanye awo anomdla ngakumbi kunabanye.
Kwinqanaba lokuqala igumbi elinamagumbi eneempahla zegolide kunye neempawu ezisuka kwiiColombia zamasiko asekuqaleni: kuyamangalisa ukuba awuhambanga kwiimyuziyam zegolide ezinomtsalane. Iziqendu ze-archeology zihlobo olupholileyo, kwaye icandelo lokuzimela lifanelekile ukuyeka, ngokukodwa ukubona "ubuso obuninzi bukaSimón Bolívar " bubonisa.
Ixesha lekoloniyali liyinxalenye engcono xa unomdla wobugcisa ukususela ngelo xesha. Kumgangatho ophezulu unemibala emidwebo yiBotero kunye namanye amacwecwe aziwa namhlanje aseColombia.
Iziphambili zeMyuziyam kaZwelonke:
Icandelo lemyuziyam liyinto encinane. Ixesha lamaRiphablikhi (kwicandelo le-1830 ukuya kweye-1900 okanye njalo) luchungechunge olungapheliyo lwama-portraits abhekene neentambo zangaphambili. Okumangalisa kukuba, ezinye zezona nxalenye ezithandekayo zembali yaseColombia, njenge -War Day Day okanye i-1928 Banana Massacre, ayichazwanga nantoni (kwaye abayithandi umboniso wawo). Kukho igumbi kwi-1948 yaseBototazo imbambano, kodwa ngandlela-thile baye benza usuku lokuqhaqhafaza nokutshabalalisa kubonakala kukukhathaza. Akukho nto kwixesha elibi elibizwa ngokuthi yiLa Violencia, akukho nto kwiPablo Escobar kwaye akukho nto malunga neFARC kunye nezinye iingxaki zanamuhla.
Ngubani ongathanda iMusic Museum?
Imyuziyamu ibhetele kwiimbali okanye ubugcisa bobugcisa. Imyuziyam kaZwelonke yaseMolombia yinto yendabuko, kwiindawo ezimbalwa zeemiboniso okanye iimbonakalo zibandakanyeka. Abantwana banokukhathazeka. Abalandeli beembali banokwathoba isiteji sesithathu ngokupheleleyo, kwaye abalandeli bezobugcisa bangakwazi ukuhamba ngokukhawuleza kwimbumbi yexesha elidala ukubona izithunywa zezulu kunye nabangcwele kwicandelo lekoloniyali ngaphambi kokuya kumgangatho ophezulu ukuze ubone iBoteros.
Kukho iimyuziyam ezibhetele kwiBotota: Abathandi bezobugcisa kufuneka baqale ukuya kwiMyuziyam yaseBotero, kwaye iimbali zembali zifanele zikhangele i-July 20 yeMyuziyam.
Abathethi baseSpeyin baya kulwa, njengoko ambalwa emiboniso anokuguqulelwa kwesiNgesi (kwaye akukho nto kwisiJamani, isiFrentshi, njl). Kucetyiswa, izikhokelo zokuthetha isiNgesi ziyafumaneka ngoLwesithathu.
Imbali yaseBotota, eColombia